यूएईलाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह – Clickmandu
यूएईलाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
क्लिकमान्डु २०७६ साउन २९ गते १७:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण भएको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत साईद हमदास अलनाकवी बीच भएको भेटमा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा लगानीको उचित अवसर भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री खतिवडाले नेपालमा पर्यटन वर्ष २०२० मनाउन लागिएको सन्दर्भमा अरबका अर्थमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गर्दै अरबी नागरिकलाई राजदूत मार्फत निमन्त्रणा सन्देश पठाई नेपाल भ्रमणमा आउन आग्रह गरे ।
आइएमएफले भन्यो- यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै
४० हजार लगानीमा शुरु भएको सदर बजारले कमाउँछ अर्बौ रुपैयाँ, बिक्छन ५ करोड बढी प्रडक्ट